ikhaya » Umbhalo woLondolozo lwababhali: uCaroline Shawley
Umbhalo woLondolozo lwababhali: uCaroline Shawley
Enye ijika kwi-Basiclight ukubala umbala we-Picasso
I-deluxe iphetha 'iGenius: i-Picasso' yeSizwe sase-London, i-UK - 05 ngoJulayi 2018: Uchungechunge lwesibini lwe-National Geographic ethandwayo yichungechunge iGenius igxile ngobomi obungavamile bentatheli uPablo Picasso. Umgcini wezemidlalo uPanjj Bajpai kwi-Encore eHollywood wahlawuliswa ngokudala umbukiso owawukhupha ixesha kunye nendawo kunye nobugcisa. Bajpai wayengumgqatswa ...
Iimiboniso Zokwenene Zinikela I-First 4K UHD yeNgcaciso yoMdlalo weBhola yeThupha kunye neTefon Communications
Ukwandiswa okutsha kumnxeba wokudlala kunika izibonelelo ze-24-yeyure yeholide yenkxaso ye-SINGAPORE, ngo-Juni 26, i-2018 -IiVisions zeNyaniso, i-cable ehamba phambili kunye ne-satellite eThailand, iye yawandisa isisombululo sayo sokudlala se-Imagine Communications ekusasazeni lo nyaka-ntshatsheli yebhola ye-4K Ultra HD . Le ngqangi yokuqala ye-Ultra HD eSouth East Asia, kwaye yenzelwe, ...
Cinga Uxwebhu Unxibelelwano Lunikela Ngokukhawuleza Kwisisombululo Sokudlala kwiCambodia ye-SEA TV
Umsasazo uya kutshintshi yesikhokelo sokudlala ngokuzenzekelayo ngokusetyenziswe kwizixhobo ezichazwe kwesoftware SINGAPORE, Juni 27, 2018 - Cinga u-Communications uqaphele imisebenzi yokudlala kwi-South East Asia ne-Television (i-SEA TV), esekelwe kuBukumkani baseCambodia. Isisombululo esitsha esisekelwe kwisofthiwe esekelwe ngokuzenzekelayo sitshintsha indawo ekhoyo "yeseshini-nge-bhokisi". I-TV ye-SEA ye-TV ephuculweyo isekelwe kwi-Imagine Communications '...
I-Dejero igubha iminyaka eyi-
I-Instrumental ekuboneleleni ngekhompyutheni yokuxhumeka kwe-intanethi, i-Dejero iqhutywe ukuzalisekisa umbono wayo wokuxhomekeka okuthembekileyo naphi na apho i-Waterloo, i-Ontario, uJuni 27, i-2018-Dejero, i-innovator kwisisombululo esiphethwe ngamafu esinikezela ukuhanjiswa kwevidiyo kunye ne-intanethi ngenkqubela okanye kwindawo ezikude, ukubhiyozela i-10 yeminyaka. Oku kubonisa iminyaka elishumi ukususela ngoB Bogdan Frusina wasungula inkampani ngoJuni 2008, kunye ...
I-FilmLight ifaka i-BLG yeFlamme kwi-NAB2018
I-plugin entsha ivelisa umbala odibeneyo wobugcisa kwi-Autodesk visual FX yesicelo, igcina ixesha lokugqiba umsebenzi osebenzayo Kwi-NAB2018, i-FilmLight iqala i-BLG yeFlamme njengemveliso yakutshanje kwibala elithandwayo le-Basiclight Editions. I-BLG yeFlamme yi-Linux kuphela iplagi ye-Autodesk Flame esebenzayo kwibakala laseBlacklight ngokuzenzekelayo, okanye kwiifayile zeBakala ezixhumene neBakala (BLG) okanye ngqo ...
I-Basiclight inceda i-Donbass idibana no-Cannes umhla wokugqibela
Iintengiso ze-movie zase-Ukrainian ezivela kwi-bluetooth ye-Baselight ipayipi, exhasa ukunikezelwa ngokukhawuleza ukunika ithuba lokuqala kwiCannes Film Festival uDonbass, ibhayisikobho entsha yombhali waseUkraine / umlawuli uSergei Loznitsa, iya kuboniswa njengenguqu yokuqhuba umsebenzi kwi-2018 Cannes Film Festival . I-Post-production yayiye kwixesha elithile eliqinileyo - ukudubula kuphela ehlanganiswe ngo-Matshi - kunye ne-Bucharest yesibonelelo seDube yeCube esebenzisa ...
I-Dejero ibuyisela i-Sky Team kwiNdlela eya kwiTour de France
Ukusebenzisana kwezobugcisa kunika iqela lebhayisiki yaseBrithani ngexesha le2018 UCI World Tour Waterloo, e-Ontario, ngoJuni 19, i-2018 - Dejero, isisombululo esiphezulu sezithuthi esinikezela ngezothutho kunye ne-intanethi ngenkqubela okanye kwiindawo ezikude, idibanise neTeam Sky ukubonelela ngesistim sokunxibelelana kwesithuthi esisebenzayo usebenzisa i-Dejero Gateway evumela iBritish ...
I-Dejero Ihambisa ukudibanisa okunokwethenjelwa kwiNtetho yaseNtaliyane kwimidlalo yasebusika
Ikhampani yokuvelisa yaseItaliyane, ilandelayo, i-Dejero izisombululo zokuhambisa iingxoxo zabadlali beendaba, iindaba, i-trivia kunye ne-pundit yokuhlaziya umxhasi wayo, i-Sky Sports Italia [i-04 April 2018] iDeero, i-innovator kwisisombululo esiphethwe ngamafu esinikezela ngezothutho zevidiyo kunye ne-intanethi ngexesha iselula okanye kwiindawo ezikude, ibike ukuba inkampani yokuvelisa yaseItaliyane, ilandela ukusetyenziswa kwezixhobo zokuthumela i-IP ezisekelwe ku-Dejero ukuhambisa ...
I-TV Globo I-Taps Cinga uxhulumaniso lwe-Up-Gen Improvement Facility
I-CALA yokusasaza ivula i-IP ekuqhubekeni kwendawo evulekileyo evulekileyo kwi-Northeast Brazil DALLAS, ngo-Aprili 9, 2018 - Ifayile yokuThengisa inikezele ngezona zinto ziphambili zeprojekthi yokudlulisela i-studio kunye neprojekthi yesimanje kwi-Recife indawo ye-TV Globo, omnye wabasasazo abakhulu eLatin America. Isixhobo esitsha se-hybrid SDI-IP, esixhaswe ngu ...